N - Sidagu Sayardaw - Ashin Nyanissara - Nyarnitthara - သီတဂူဆရာတော် အရှင်ဉာဏိဿရ / Audio/Video [ ဗီဒီယိုနှင့်အသံဖိုင်များသာ ] Monk Donates foods and...
Monk Donates foods and medical equipments သီတဂူဆရာတော်ကြီး သိန်းပေါင်း ၆၀၀ အကုန်ကျခံကာ အင်းစိန်ထောင်ထဲမှာ လှူဒါန်းခဲ့ပြီး...
Tags: သီတဂူ - Sitagu sidagu thitagu thidagu insein Books - ဓမ္မရေးရာစာအုပ်များ / Z - Maung ZayYar - မောင်ဇေယျာ / Others - အခြားပုဂ္ဂိုလ်များ ဗုဒ္ဓဘာသာက...
Posted By: ahtar04
ဗုဒ္ဓဘာသာကို ကမ္ဘာသိစေခဲ့သော မြန်မာများ
Tags: www.bbfse.org ဗုဒ္ဓဘာသာကို ကမ္ဘာသိစေခဲ့သော မြန်မာများ buddha myanmar kabar world - DHAMMA TV CHANNELS / LIVE / Audio/Video [ ဗီဒီယိုနှင့်အသံဖိုင်များသာ ] DHAMMA TV CHANNEL9-...
ကလေးများအတွက် ဗဟုသုတရဖွယ်ရာများ -
MYANMAR DISNEY (dhamma.tv ch 9)
Tags: ကလေးများအတွက် ဗဟုသုတရဖွယ်ရာများ - Dhamma TV R - Recorded Live - တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ခဲ့သော ဗီဒီယိုများ / Audio/Video [ ဗီဒီယိုနှင့်အသံဖိုင်များသာ ] 2010...
Added: 8th November 2010
အမေရိကန်နိုင်ငံ၊ ကာလီဖိုးနီးယားပြည်နယ်၊ လော့စ် အိမ်ဂျလိစ်၊ အဇူဇာမြို့၊ ဗြဟ္မ၀ိဟာရကျောင်းတွင်Oct 24, 2010 မှစ၍ Oct 31,...
Tags: အသံမစဲမဟာပဋ္ဌာန်းရွက်ဖတ်ပူဇော်ပွဲ - Patthana nonstop_patthan maharpatthan pathtan pathan pahtan pa htan patan pa tan ပဋ္ဌာန်း live -DHAMMA RADIO CHANNELS / LIVE / Audio/Video [ ဗီဒီယိုနှင့်အသံဖိုင်များသာ ] DHAMMA RADIO CHANNEL9-...
(၈)ရက်ဆက်တိုက် အသံမစဲမဟာပဋ္ဌာန်းရွက်ဖတ်ပူဇော်ပွဲ - Dhamma Radio Channel 11 အသံမစဲမဟာပဋ္ဌာန်းရွက်ဖတ်ပူဇော်ပွဲ (၂၄.၁၀.၂၀၁၀) မှ...
Tags: အသံမစဲမဟာပဋ္ဌာန်းရွက်ဖတ်ပူဇော်ပွဲ Dhamma_Radio_channel pahtan patan non stop D - Dhamma Songs - Dhammapuzar - ဓမ္မပူဇာတေးများ / Audio/Video [ ဗီဒီယိုနှင့်အသံဖိုင်များသာ ] Myanmar song, Father & Son
Posted By: kyaw99
Myanmar traditional country song(DVD quality video).
Tags: Music Myanmar burmese vcd song music karaoke D - Dhamma Songs - Dhammapuzar - ဓမ္မပူဇာတေးများ / Audio/Video [ ဗီဒီယိုနှင့်အသံဖိုင်များသာ ] ၀ါတွင်းဒိ...
Posted By: dhammasong
myanmar song , ရွှေယမင်းဦး
Tags: Music classic D - Dhamma Songs - Dhammapuzar - ဓမ္မပူဇာတေးများ / Audio/Video [ ဗီဒီယိုနှင့်အသံဖိုင်များသာ ] ဇောတိကလို...
myanmar song , စိုးစန္ဒာထွန်း နှင့်အဖွဲ့
Tags: Music classic D - Dhamma Songs - Dhammapuzar - ဓမ္မပူဇာတေးများ / Audio/Video [ ဗီဒီယိုနှင့်အသံဖိုင်များသာ ] တစ်မူး...
myanmar song , ဘိုဖြူ
Tags: Music pop D - Dhamma Songs - Dhammapuzar - ဓမ္မပူဇာတေးများ / Audio/Video [ ဗီဒီယိုနှင့်အသံဖိုင်များသာ ] လှူနေရမှ...
myanmar song , ရာဇာဝင်းတင့်
Tags: Music classic Pages: 1234567 of 10